भान्सामै औषधी | SwasthyaNews.Com Nepal's Leading Health News Portal
अण्डा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ। तर एकदिनमा कति अण्डा खानुपर्छ र पकाउने सही तरिका के हो भन्नेबारेमा तपाईंलाई थाहा छ ? या धेरै अण्डाले हानी गर्न सक्छ ? ...
जाडो मौसममा न्यायो कपडा लगाएर वा हिटरको प्रयोग गरेर मात्रै होइन खानपानको माध्यमले पनि चिसो भगाउन सकिन्छ । चिसोबाट जोगिनको लागि खाइने खाद्यपदार्थहरुमा तातो सुप र झोलयुक्त तरकारीहरु हाम्रो रोजाईमा पर्छन् । तातो सुपहरुको सेवन गरेर हामीले आफ्नो शरीरलाई न्यानो राख्छौं । ...
डन्डीफोर र कालोपोतोले अनुहार कुरुप बनाएको हुन्छ । अनुहारमा देखिने प्रमुख छालाका समस्याहरुमा पर्दछन । डन्डीफोर र कालोपोतोले मानिसको आत्मबिश्वास समेत घटाउछ । अनेकौ औषधी बजारमा डन्डीफोर र कालोपोतो हटाउनको लागि आएको हुन्छ । ...
फर्सीको मुन्टा मन पर्छ ? हुन्छ यस्ता अनेकौ गुण, यस्ता छन् फाईदै फाईदा
फर्सीको पातको साग वा फर्सीको मुन्टा खानुको फाइदाबारे सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले आज हामी तपाईँलाई फर्सीको पातको साग खानुको फाइदाबारे जानकारी दिन चाहन्छौ । फर्सीको साग विभिन्न पौष्टिक तत्वले भरिएको हुन्छ । ...
नेपाली भान्सामा खासगरी अचारको रुपमा प्रयोग गरिने पुदीना लोकप्रिय जडिबुटी हो। यसले खाना पचाउन सहयोग गर्नुका साथै तौल घटाउने, अरुचीबाट मुक्ति दिने, डिप्रेसन तथा थकान घटाउने र टाउको दुखाई हटाउनेलगायतका काम गर्छ। ...
रुख कटहरका यस्ता छन फाइदा
रुख कटहर अचम्म खालको तरकारी हो । यो तरकारी हो कि फलफूल हो भन्ने कुरामा पनि मतभेद पाइन्छ । कतिपय स्थानमा यसको सेवन गुणकारी मानिन्छ भने कतिपय मानिस यसलाई हेर्नसम्म पनि रुचाउँदैनन् । कतै यसलाई तन्त्रमन्त्रका लागि उपयोगमा ल्याइन्छ भने कतै यसलाई अशुभ मानेर छुनसम्म डराउँछन् मानिसहरू । ...
बच्चाको शरीरको विकास उसको खानपानमा निर्भर गर्छ । यसका साथै मानसिक विकास पनि स्वस्थ र पौष्टिक आहारमा भर पर्छ । यदि बच्चाको आहारमा जरुरी सबै पौष्टिक तत्व छ भने मानसिक विकास पनि तीब्र रुपमा हुन्छ। ...
सुन्तला : सुन्तलामा क्रिप्टोसान्थिन भन्ने तत्व पाइन्छ, जसले फोक्सोमा क्यान्सर हुने जोखिम कम गर्छ । सिस्नु : सिस्नुमा आइरनको मात्रा उच्च हुन्छ । सिस्नु खानाले फोक्सोमा भएको इन्फेक्सनको प्रभाव कम हुन्छ । ...